IBC 2019: Famoronana tantara an-tsary ho an'ny mpisava lalana, NewTek sy NDI Unite - NAB Show News nataon'i Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Content Creation » IBC 2019: Famoronana tantara an-tsary amin'ny fanaovana pirinty, fanaovana ny Vizrt, NewTek ary NDI Unite
IBC 2019: Famoronana tantara an-tsary amin'ny fanaovana pirinty, fanaovana ny Vizrt, NewTek ary NDI Unite
Bergen, Norvezy - Vizrt, NewTek™ ary NDI® dia tonga ao amin'ny IBC 2019 (mitsangana 7.B01) eo ambanin'ny marika elo Vizrt Vondrona - mampiray ny marika fitantarana tantara ho an'ny mpisava lalana telo amin'ny tanjona tokana - mba hanampiana ny mpanjifa amin'ny fandefasana tantara bebe kokoa, hoy ny tsara kokoa.
The Vizrt vondrona marika mety ahafahan'ny mpanjifa hifehy ny fahasarotan'ny tantara ara-sary ary hampihena ny fahaiza-mamorona azy ireo. Miaraka, ireo marika dia manome fidirana amin'ny sehatra be mpampiasa amin'ny vahaolana mifototra amin'ny famolavolana IP mifototra amin'ny rindrambaiko voafaritra amin'ny rindrambaiko - manompo ny karazan'entana isan-karazany amin'ny karazana fandaminana.
Mandritra izany fotoana izany, NewTek ary Vizrt hanofa ny làlan'izy ireo efa misy eo an-tsena ary hitoetra ho voatokana ho an'ny mpanjifany tsirairay avy.
Vizrt hanohy ny fanavaozana sy hamolavola ny tontolo iainana izay ahafahan'ny ambaratonga ambony amin'ny tantara an-tsary amin'ny fandefasana, ny orinasa ary ny fampahalalam-baovao vaovao. Io dia azo idirana amin'ny mpanjifa avy amin'ireo ekipa manam-pahaizana momba ny serivisy momba ny serivisy momba ny serivisy, mpitantana kaonty ary mpitantana fahombiazan'ny mpanjifa.
NewTek dia hanohy hanome feo isaky ny mpamaky amin'ny alàlan'ny horonan-tsary amin'ny alàlan'ny tamba-jotra famerenany matanjaka. NewTek dia manolo-tena hiara-miasa amin'ny mpiara-miasa amin'ny fantsona hahavitana ny filan'ny mpampiasa farany ary ny làlan'ny marika mankany amin'ny tsena dia 100% amin'ny alàlan'ny fantsona ankolaka.
NDI, ny zom-pirenena teratany, mifototra IP, mazotra fampifandraisana horonan-tsary dia ho mipetraka eo ambany marika marika Vizrt Group. Izany dia hanome ny marika NDI ho antonony mifantoka sy fahaleovan-tena, ka ahafahana manome izany soatoavina bebe kokoa NewTek ary Vizrt vahaolana ho an'ny mpanjifa, ary koa ireo mpiara-miasa amin'ny antoko fahatelo.
Michael Hallen, CEO, dia naneho hevitra: “Izahay izao dia eo am-pisainana hamahana ny fanavaozana sy ny herin'ny injeniera Vizrt, NewTek ary NDI ho tombontsoan'ny mpanjifanay rehetra. Tena faly aho manampy ny mpanjifantsika hahatratra ny tanjon'izy ireo amin'ny alàlan'ny fandefasana ny fananana ara-tsaina mahery vaika, tamba-jotra manan-danja sy ireo mpitondra eritreritra momba ny indostria. Ity dia hitaterana ny iraka ataonay, izay amboarina fotsiny: tantara maro kokoa, hoy ny tsara kokoa. "
The Vizrt vondrona marika no tohanan'ny mpiasa 700 ao amin'ny birao eran-tany 30, ary manisa ny CNN, Fox, BBC, Mediacorp, New York Giants, SBS, Tencent, Globosat, ary MTV eo amin'ireo mpanjifany.
fampitana injeniera fampitana Engineering Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor fanadihadiana, Digital Nirvana, fanarahamaso ny media, IBC Video injeniera	2019-09-03
Previous: LYNX Technik dia nanambara ny 8K SDI Fiber Converter amin'ny IBC 2019
Next: CUESCRIPT HANAO ANAO SMPTE 2110 IP CONNECTIVITY MONITOR AT IBC2019